कोरिया जस्तो सजिलो छैन् जापान रोजगारी छनोट,भाषामा दोहोरो मापदण्ड - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०७५, सोमबार
काठमाडौं । नेपाली कामदार जापान लैजान दुई देशका सरकारबीच समझदारी भएसँगै नेपाली कामदारका लागि नयाँ बजार खुलेको छ। तर जापानले नेपाली कामदार लैजाने गाइँगुइँ चलेदेखि नै निजी क्षेत्रले केही महिना पहिलेदेखि धमाधम जापानी भाषा सिकाउने संस्था खोलेका थिए। कतिपय युवाले भाषा सिकेको प्रमाणपत्र बोकेर कामदारका रूपमा जापान जाने पर्खाइमा रहेको बताउने गरेका छन्। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा दुवैमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्र जापानले कामदारका रूपमा लैजाने समझदारीपत्रमा उल्लेख भएकाले प्रमाणपत्रको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।
जापानको रोजगारी भने कोरिया जस्तो सजिलो रहने छैन् । वर्षेनी दशौं हजार व्यक्तिलाई रोजगारी अवसर दिइरहेको कोरियाले कामदार छनोटको आधार भाषालाई बनाएको छ । एउटा व्यक्ति सिधैं भाषा परीक्षामा सफल हुन सके उसले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छ । तर, जापानले भाषामा दोहोरो मापदण्ड लगाउने तयारी गरेको छ । जापानी भाषा परीक्षाको लागि अहिले २ संस्थाले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसमा एनबीएस न्याट र त्रिभुवन विश्वविद्यलय रहेका छन् ।
न्याटले वर्षमा २ महिनाको फरकमा ६ पटक भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने विश्वविद्यालयले वर्षमा २ पटक अंग्रेजी महिनाको जुलाई र डिसेम्बर जेएलपीटी परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । जापानी भाषा परिक्षाको मापदण्ड पाँच तहसम्म रहेको छ । सामान्यतया परीक्षाको मापदण्ड एन ५, एन ४, एन ३, एन २, र एन १ तोकिएको हुन्छ । यसमा पनि ग्रेड ए देखि ग्रेड डी सम्म तोकिएको हुन्छ । ग्रेड ९० देखि शुरु हुनेछ । ९० देखि १०० ल्याउनेलाई डी ग्रेड, १०० देखि १२० ल्याउनेलाई सी १२० देखि १४० सम्म ल्याउनेलाई बी र १४० देखि १६० अंक ल्याउनेलाई ए ग्रेडमा राख्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसरी भाषा परीक्षामा पास भएपछि पुनः जापानी पक्षले भाषा परीक्षण गर्नेछ । जापानी अधिकारीले लिएको भाषा परीक्षणको अंक नै अन्तिम हुनेछ । कामदारको रुपमा जापान जान चाहानेले जेएलपीटी परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ । जापानी भाषा परीक्षा एवम् सीप परिक्षणको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्र्तगत छुट्टै इकाई गठन गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ । यद्यपी कस्तो किसिमको मापदण्ड निर्माण हुने भन्ने अहिले तयार भैसकेको छैन ।
के-के मा छ रोजगारी ?
सम्झौतामा १४ वटा कार्य क्षेत्रहरु तोकिएका छन् । जसमा कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग मेसिनरी पार्टस उद्योग, माछा मार्ने तथा पाल्ने उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाई र व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग रहेका छन् । यी १४ क्षेत्रमा उच्च दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिले मात्र रोजगारीको अवसर पाउने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारी सम्बन्धी अझै अध्ययन हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कस्तो व्यक्तिलाई अवसरको सम्भावना बढि ?
सरकारले कोरियन मोडलमै नेपाली कामदार लैजाने भनिएतापनि कोरिया भन्दा जापानको लागि भाष परीक्षा अलि भिन्न रहनेछ । भाषा परीक्षामार्फत् जापान जाने कामदारको न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ हुनेछ ।जापान सरकारले नेपालबाट कामदार भित्र्याउन चाहेको १४ क्षेत्रमध्ये कुनै विषयमा दक्ष हुनु पर्नेछ । यदि कुनै व्यक्ति नर्सिङ केयरमा जान इच्छुक छ भने उसले पहिले जेएलपीटीको एन४ तहको भाषा परीक्षा पास गरेको हुनु पर्नेछ । यसरी भाषा परीक्षामा पास भएपछि मात्र जापानी अधिकारीले लिने सिप तथा भाषा परीक्षणमा सहभागी हुन पाइनेछ ।
यसरी छनोट भएको कामदारलाई २ भागमा विभाजन गरिनेछ (एसएसडब्लु) पहिलो वर्ग र (एसएसडब्लु) दास्रो वर्ग । पहिलो वर्गका श्रमिक बढीमा ५ वर्ष काम गर्न पाउनेछन् भने भने दास्रो वर्गका कामदारको समय थप पनि हुन सक्नेछ । दुबै वर्गका कामदारले आफ्नो परिवार समेत लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी वर्गका कामदारहरुलाई जापानी नागरिक सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी जापान जाने कामदारको लागि जापान सरकारको सार्वजनिक रोजगार केन्द्र हेल्लो वर्कले सहयोग तथा समन्वय गर्नेछ ।
चर्चा, विवाद र तरङ्गले भरिएको ‘२०७५’: राजनीति मिसन अलमलमा,वाइडबडीले नयाँ तरङ्ग
नेत्र पण्डित काठमाडौं । आज २०७५ सालको अन्तिम दिन। यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरू जस्तै विभिन्न […]